Mitombo amin’ny alalan’ny kolontsaina sy fiteny ny herim-panintonana Shinoa ao Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Mety hanome lanja ny paikadim-panintonana ny Ivotoerana Confucius any Kyrgyzstan.
MpanoratraAizat Shailoobek kyzy
Voadika ny 16 Septambra 2021 3:56 GMT
Vavahadiben'ny Ivotoerana Confucius ao amin'ny Oniversite Nasionalin'i Balasagyn Kyrgyz any Bishkek, Kyrgyzstan. Saripikan'i Aizat Shailoobek kyzy, nahazoana alàlana.
Tafasaraka ela teo amin'ny kolontsaina sy ny fiteny, miha-mifanakaiky ara-toekarena ankehitriny i Kyrgyzstan sy i Shina ho ampahany amin'ny Fisantaran'Andraikitra Belt and Road Initiative (BRI). Niteraka fihetsika fankahalana Shinoa (Sinophobic) teo amin'ny vahoakan'i Kyrgyzstan ny fisiana ara-toekarena an'ireo Sinoa mpampiasa vola. Tao anatin'izay taona faramparany izay anefa, nanalefaka ny fomba fijery ratsy eto amin'ny mpifanila vodirindrina ao atsinanany ny fampianarana ny fiteny Mandarin sy ny hirika lehibe hianatra any Shina.
Zava-dehibe amin'ity paikady matanjaka malefaka ity ny fisian'ny Ivotoerana Confucius miparitaka manerana an'i Kyrgyzstan. Manana birao 500 mahery manerana izao tontolo izao, fihaonan-dalana ho an'ny kolontsaina sy ny fiteny Sinoa ireo ivotoerana ireo. Manampy amin'ny fananganana endrika tsara ho an'i Shina eo amin'ireo tanora Kyrgyzstaney ihany koa ny asan'ny sampana ao Kyrgyzstan.
Nanome vatsim-pianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra mba hianatra any Shina ny governemanta Shinoa ary nanampy azy ireo hianatra teny Mandarin, izay nanosika ireo mpianatra ho zatra ny fiteny sy ny kolontsaina Shinoa amin'ny fiezahana hahita asa tsara karama.
Napetraka voalohany manerantany tamin'ny taona 2004 ny Ivotoerana Confucius. Ho an'i Kyrgyzstan, nisy ny dingana lehibe voalohany niavaka tamin'ny volana Aogositra 2007, rehefa nitsidika ny renivohitra Bishkek ny filoha Shinoa teo aloha Hu Jintao ary nanasonia fanambaràna fiarahamiasa izay ahitana ny fanamafisana ny fifanakalozana fanabeazana eo amin'ny firenena roa tonta. Vokatr'izany dia nisy ireo Ivotoerana Confucius maromaro nosokafana, anisan'izany ny iray tao amin'ny Oniversitem-panjakana Bishkek ary iray tao amin'ny Oniversitem-pirenena Kyrgyz.
Mpianatra an'arivony no nipetraka tao amin'ny efitranon'ny Ivotoerana Confucius tao Kyrgyzstan tao anatin'ny 14 taona nisokafany. Toeram-pampianarana malaza iray ny sekolim-panjakana ambaratonga faharoa ao Bishkek N. 95, namboarina niaraka tamin'ny fanampian'i Beijing, izay manome fampianarana Mandarin betsaka ho an'ny ankizy. Nisokatra tamin'ny volana septambra 2017 ny sekoly ary nampiditra mpianatra 1.000 mahery isan-taona.
Lasa malaza any Kyrgyzstan ihany koa ny teny Shinoa. Tamin'ny taona 2017, mpianatra oniversite manodidina ny 2000 no voasoratra anarana hianatra teny Mandarin tao amin'ny Oniversitem-panjakana Bishkek sy tao amin'ny Oniversitem-pirenena Kyrgyz. Talohan'ny areti-mandringana COVID-19, mpianatra maherin'ny 7.000 no nianatra tao amin'ny Ivotoerana Confucius any Kyrgyzstan.
Tamin'ny taona 2019, talohan'ny fitsidihany tany Kyrgyzstan, namoaka lahatsoratra ny filoham-pirenen'i Shina Xi Jinping, izay nanamarihany ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana eo amin'ireo firenena ao anatin'ny tontolon'ny BRI. Nanome tarehimarika momba ny fandaharana ara-panabeazana mampifandray ireo firenena roa tonta ireo ihany koa izy: tamin'ny taona 2018, olona maherin'ny 70000 no nivezivezy tao Kyrgyzstan sy Shina, ary mpianatra Kyrgyz 4.600 mahery no nianatra tany Shina. Tamin'ny taona 2020, nanambara ny minisiteran'ny raharaham-bahiny any Kyrgyzstan fa mpianatra mihoatra ny 4000 avy any Kyrgyzstan no nianatra tany Shina.
Raha ampitahaina, mpianatra Kyrgyz 1 000 eo ho eo ihany no tafiditra ao amin'ny anjerimanontolo Tiorka.
Na izany aza, kely ireo tarehimarika ireo raha ampitahaina amin'ny isan'ny mpianatra avy ao Kyrgyzstan any Rosia. Tamin'ny taona 2021, nilaza ny minisitry ny fanabeazam-pirenena taloha tany Kyrgyzstan, Almazbek Beishenaliev fa mpianatra Kyrgyz manodidina ny 16000 no voasoratra anarana ankehitriny ao Rosia.
Niresaka tamin'ireo olom-pirenena Kyrgyz maromaro nianatra teny Shinoa ny Global Voices, na tany Kyrgyzstan na nandritra ny fifanakalozana fampianarana tany Shina.
Nilaza i Nurayim Kudayar kyzy, mpandika teny, 26 taona, fa sarobidy tokoa ny fahalalana ny fiteny Mandarin amin'izao fotoana izao, satria manome hirika amin'ny asa mitaky fahaizana teny Shinoa sasantsasany ny BRI. Mifamatotra be amin'ireo tetikasa BRI ny orinasa iasàny, amin'ny ankapobeany mandray mpiasa avy any Shina, sy injeniera, mpanao lalana, mpitan-kaonty, mpandika teny ary manam-pahaizana manokana hafa ao an-toerana.
Nilaza i Cholpon Asylbek kyzy, izay niasa ho mpandika teny tao amin'ny toeram-pitrandrahana solika Kara-Balta fa nanampy azy hifampiraharaha karama ambonimbony kokoa ny fahaizany ny fiteny Mandarin. Nilaza koa izy matetika mankany Shina ny sasany amin'ireo namany sy olo-pantany mba hiasa ho mpitaridia sy mpandika teny ho an'ireo mpizahatany miteny Rosianina.
Talohan'ny valan'aretina COVID-19 namely ny sehatry ny fizahan-tany manerantany, niasa ho mpitaridia sy mpandika teny tamina orinasa fizahan-tany Shinoa i Aisuluu Sirazhidinova.
Learning Chinese is a unique opportunity for Kyrgyzstani students, who gain language skills and life experience in China. Some students study and work at the same time to help their relatives. In this regard, China has created good conditions for young students from Kyrgyzstan.
Hirika tsy manampaharoa ho an'ireo mpianatra Kyrgyzstaney izay manana fahaizana ny fiteny sy traikefam-piainana any Shina ny fianarana ny teny Shinoa. Misy ireo mpianatra sasany no sady mianatra no miasa mba hanampy ny fianakavian'izy ireo. Amin'izany, namorona fepetra tsara ho an'ireo tanora mpianatra avy Kyrgyzstan i Shina.
Tsy mora mihitsy ny fahazoana vatsim-pianarana hianatra any Shina, hoy ireo mpianatra. Manakana ny fidirana amin'izany ny kolikoly eo amin'ireo mpianatra sy mpampianatra eo an-toerana na dia ho an'ireo mianatra ao amin'ny Ivotoerana Confucius sy manana fahaizana ny fiteny aza.
Tsy tsara anefa izany rehetra izany: nizara ny traikefa ratsy niainany tamin'ireo mpampianatra ao amin'ny Ivotoerana Conficius ny mpanome vaovao iray izay niangavy tsy hotononina anarana
A few years ago, local and Chinese teachers at the Confucius Institute where I studied asked for bribes to select students to go to China. I was told that the fee to pay was between 1,000 and 5,000 USD depending on which city I wanted to go. Despite not paying the bribe, I managed to collect all necessary documents and enrol in a university in Beijing.
Taona vitsy lasa izay, nangataka kolikoly tamiko mba hifantina mpianatra ho any Shina ireo mpampianatra Shinoa sy mpampianatra eo an-toerana ao amin'ny Ivotoerana Confucius izay nianarako. Nolazaina tamiko fa ny sarany amin'izany dia anelanelan'ny 1.000 sy 5.000 dolara Amerikana miankina amin'ny tanàna tiako handehanana. Na dia tsy nandoa ny kolikoly aza, nahavita nanangona ireo antontan-taratasy rehetra ilaina aho ary tafiditra tamin'ny oniversité ao Beijing.
Na dia eo aza ny fiaretana ny toetra manohitra ny Shinoa ao Kyrgyzstan, hita fa toa mitombo ny isan'ireo Sinophiles (mpitia Shinoa) eo amin'ireo tanora Kyrgyzstaney.
Anisan'ny fanadihadiana nataon'ny Civic Media Observatory ao anatin'ny tantara lehibe momba ny Belt and Road Initiative any Shina ity tantara ity ary mitrandraka ny fomba fananan'ireo fiarahamonina sy vondrom-piarahamonina fahitana samihafa momba ny tombontsoa sy ny fahavoazana misy amin'ny fampandrosoana tarihin'ny Shinoa. Tsindrio eto raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ity tetikasa ity sy ny fomba fiasany.